စပါးစ်ကစားသမားများနှင့်ပထမဆုံး တွေ့ဆုံမှုတွင် အန်တိုနီယိုကွန်တီ ဘာပြောခဲ့လဲ? – Play Maker Sports Journal
စပါးစ်ကစားသမားများနှင့်ပထမဆုံး တွေ့ဆုံမှုတွင် အန်တိုနီယိုကွန်တီ ဘာပြောခဲ့လဲ?
အသက်၃၄နှစ်ရှိပြင်သစ်လက်ရွေးစင်ဂိုးသမားက “တကယ့်ရိုးရိုးလေးပါ။သူကရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့သူပါ။အဝတ်အစားလဲခန်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုသူ့ဘက်ကအပြည့်အဝယုံကြည်မှုရှိတယ်။သူဟာအသင်းတိုးတက်လာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့သူပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကလပ်နဲ့ပရိသတ်တွေကိုပိုပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပြသရပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးနည်းပြတွေထဲကတစ်ဦးလက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးပါ။အလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်မှာရောအသင်းအပေါ်မှာပါ ယုံကြည်မှုရှိရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပြီးပန်းတိုင်သို့ချီတက်ရပါမယ်”လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။
စပါးစ္ကစားသမားမ်ားႏွင့္ပထမဆုံး ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ အန္တိုနီယိုကြန္တီ ဘာေျပာခဲ့လဲ?
အသက္၃၄ႏွစ္ရွိျပင္သစ္လက္ေ႐ြးစင္ဂိုးသမားက “တကယ့္႐ိုး႐ိုးေလးပါ။သူကရည္မွန္းခ်က္ႀကီးတဲ့သူပါ။အဝတ္အစားလဲခန္းမွာရွိတဲ့လူတိုင္းကိုသူ႔ဘက္ကအျပည့္အဝယုံၾကည္မႈရွိတယ္။သူဟာအသင္းတိုးတက္လာဖို႔အတြက္အေကာင္းဆုံးလုပ္ေပးဖို႔အသင့္ရွိေနတဲ့သူပါ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္းကလပ္နဲ႔ပရိသတ္ေတြကိုပိုၿပီးေတာ့တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈျပသရပါမယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာအေကာင္းဆုံးနည္းျပေတြထဲကတစ္ဦးလက္ေအာက္မွာအလုပ္လုပ္ခြင့္ရတာတကယ့္ကိုႀကီးမားတဲ့အခြင့္အေရးပါ။အလုပ္လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအေပၚမွာေရာအသင္းအေပၚမွာပါ ယုံၾကည္မႈရွိရမယ့္အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၿပီးပန္းတိုင္သို႔ခ်ီတက္ရပါမယ္”လို႔ေျပာၾကားသြားပါတယ္။